Tu Tu Tha: ဝတ္ထုတို ၁၉
အလွန်ဆိုး အလွန်တေသလောက် အလွန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ (ဂလိုပဲပြန်ဖားရတယ်) သယ်ယင်းတသိုက်ကို သတိရလွန်းလို့ အစပြန်ဖော်တာပါ :P ရောက်ရာအရပ်က ဆဲကြပါကုန် ...။
အစကတည်းက သေချာပြောတယ်။ ဒါမျိုးလုပ်ရင် ဒါမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာ ...။ ဘယ်လိုပြောပြော မရဘူး။ ရပါတယ် အေးဆေးပါ ဆိုတာချည်းပဲ။ သူ့အကြောင်းလည်း အားလုံးသိတယ်၊ အားလုံး အကြောင်းလည်း သူသိတယ်၊ ပြီးတော့ အားလုံးအကြောင်းလည်း အားလုံးသိတယ်လေ။
ရှုပ်ကုန်ပြီလား .. မရှုပ်ပါဘူး။ သူဆိုတာ ဝဏ္ဏလေ။ ညဘက်မှာလုပ်ချင်တာ လုပ်ထားသမျှ ... မိုးလင်းလို့ ပြန်ပြောရင် အမြဲ “ငါဘာလုပ်လို့လဲ” လို့ ပြောနေကျ။ သူတင်ပဲလား ... မဟုတ်သေး ... တရုတ်ကြီးကောပဲ။ အတူတူပဲ “ငါဘာလုပ်လို့လဲ” ဆိုတဲ့ထဲ သူလည်း ထိပ်ဆုံးက။
စင်ကာပူ ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ အင်ဂျင်နီယာ အလုပ်သွားလုပ်ပြီး ပြန်လာလို့ .. အကျင့်ပြောင်း သွားမယ် ထင်လို့လား။ အင်း .. ထင်မိတယ်ဆိုရမလားဘဲ။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေကလည်း အမှတ် သည်းခြေက ခပ်နည်း နည်းရယ်။
တနေ့ကပဲ တရုပ်ကြီးယောက္ခမသစ်စက်မှာ သွားသောက်ကြပြီး ရန်တွေဖြစ် ... အင်္ကျီချွတ်ကြီး နဲ့ သစ်စက် ကနေ ၂ မိုင်လောက်လျှောက်ရတဲ့ ကိုဆုတို့အိမ်ကို တယောက်ထဲ ရောက်လာလို့ ကိုဆုက သူ့ကို အိမ်ပြန်ဖို့ မြင်းလှည်း စင်းလုံးငှားပေးလိုက်ရသေးတယ်လေ။
အဲဒီနေ့မှာပဲ ဆိုက်ကားခေါင်းခန်းမှာ “သားမှားပြီအမေရဲ့” လို့အော်ရင်း ပါသွားတဲ့သူ့ကို လပ်ကီး လက်ဖက်ရည် ဆိုင်ကနေ လှမ်းတွေ့တဲ့ ဆင်ကြီးတို့အုပ်စုက မခေါ်ရဲလို့ အသာလေး ကြည့်နေလိုက်ရတာတဲ့။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ အဲဒီဆိုက်ကားနောက်ကနေ သူ့အမေက တုတ်တချောင်းနဲ့ လိုက်လာတာဆိုပဲ။ သူတို့သားအမိ အဲဒီပုံစံအတိုင်း လပ်ကီးရှေ့ကနေ ခေါက်တုံ့ခေါက်ပြန် သွားနေကြတာတဲ့။
နောက်တနေ့မနက်ကျတော့ သူမဟုတ်သလို ..။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကိုရောက်လာပြီး ဟီးဟီး ဟားဟားနဲ့။ ဒီလိုနဲ့ ဒီအစီအစဉ်ကို ထပ်ဆွဲဖြစ်သွားတာ။
ဒီတခါတော့ သူ့အမေနဲ့အဘွားက ဘယ်မှ သွားမနေနဲ့ အိမ်မှာပဲ ကြိုက်တာလုပ်ကြတဲ့။ အရွယ် တွေကလည်း ကြီးကောင်ကြီးမားတွေ ဖြစ်နေပြီ။ လူမြင်လို့ မသင့်တော်ဘူးတဲ့။ သူတို့ထဲမှာ ကျူရှင်ဆရာ တကောင်လည်းပါတာဆိုတော့ မတော် သူ့တပည့်တွေတွေ့ရင် အရိုအသေ တန်မှာလည်း စိုးရသေးတယ်လေ။ သူ့အမေနဲ့ အဘွားက အမြည်းတွေ စိတ်ကြိုက်လုပ်ပေး မယ်တဲ့။
သူ့အမေနဲ့ အဘွားခမျာလည်း သားယောက်ျားလေး ငပွေးသုံးယောက်ရဲ့ အမေနဲ့ အဘွား ဖြစ်နေလေတော့ တော်တော်လေး နားလည်ပါတယ်။ တခုတော့ရှိတယ် သူတို့အဖေတော့ အိမ်မှာမရှိဘူးပေါ့။ နောက် ၂ ရက်လောက်ဆို ခွင့်စေ့လို့ စလုံးကို ပြန်ရတော့မှာမို့လည်း အမေနဲ့ အဘွားက ခွင့်ပြုတာပါ။
အစပိုင်းကတော့ ဟုတ်လို့ပဲ ...။ ရွာထဲက ထန်းရည်ကို ပလတ်စတစ်ပုံးကြီးနဲ့ တပုံးမှာထား တာ။ ထန်းရေလေးသောက်လိုက်၊ ဖဲလေးရိုက်လိုက်နဲ့ ... ဂစ်တာတီးတဲ့သူကတီးပေါ့။ ဟုတ်နေတာလေ ..။
တရုတ်ကြီးတို့ လင်မယားက နောက်ကျမယ်လို့ ပြောထားပြီးသား။ ကျူရှင်ဆရာကလည်း အတန်းပြီးမှ လာနိုင်မယ်တဲ့။ နောက်ပြီး သူ့မိန်းမက ကလေးမွေးထားတာ ၃ လပဲရှိသေးတာ ဆိုတော့ သူ တယောက်ထဲပဲလာမယ်တဲ့။ ရောက်နေကြတာက ရခိုင်ကြီးရယ်၊ နှဲတို့လင်မယား ရယ်၊ တိုးကြီးရယ်၊ ဖိုးသိုက်တို့လင်မယားရယ်ပေါ့၊ အိမ်ကြီးရှင် ဝဏ္ဏကတော့ အပေါ်ထပ်က သူ့အမေနဲ့ အဘွားလုပ်ပေးသမျှ အမြည်းတွေကို အောက်ချပေးရင်း သူ့ ချစ်မမ အလာကို တမျှော်မျှော်ပေါ့။
ရခိုင်ကြီးကတော့ ဒိုင်ခံ ဂစ်တာတီးသီချင်းဆိုပဲ။ ကျန်တဲ့သူတွေက အလှည့်ကျ ပိုကာဝိုင်းကို ဝင်ထိုင်နေကြတာ။ တိုးကြီးနဲ့ နှဲကြီးရယ် ဖိုးသိုက်မိန်းမ ဗိုက်ကြီးရယ်ကတော့ ဖဲဝိုင်းက မထတမ်းပဲ။ ဖဲဝိုင်းဖြစ်ရတာက အဲဒီဗိုက်ကြီးသည်ကြောင့်ပါ။ ကြံကြံဖန်ဖန် ချဉ်ချင်းတပ်တယ် ဆိုလားပဲ။
နှဲကြီးမိန်းမ နပ်စ်မကတော့ ထန်းရည်တွေ တခွက်ပြီးတခွက်မော့ပြီး တဟားဟားရယ်နေပြီ။ အချိန်က ကုန်လို့ ကုန်မှန်းမသိဘူး။ ထန်းရည်ကလည်း ကုန်လို့ ကုန်မှန်းမသိဘူး ဆိုရမယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ဝဏ္ဏရဲ့ မမရောက်လာတယ်။ သူတို့အားလုံး မူးလို့မူးမှန်းမသိဘဲ မူးနေကြပြီ။ ဆိုးတာက ဝဏ္ဏ ဘယ်လောက်မူးနေပြီလဲဆိုတာ ဘယ်သူမှ အသေအချာ မပြောနိုင်ကြဘူး။ မပြောနိုင်ဆို အားလုံးလည်း မူးနေတာကိုး။ ဝဏ္ဏမမ ဘယ်အချိန်ပြန်သွားလဲတောင် မသိ လိုက်ကြဘူး။
နောက်တော့ တရုတ်ကြီးတို့ လင်မယားရောက်လာတယ်။ ကျူရှင်ဆရာလည်း ရောက်လာ တယ်။ တရုတ်ကြီးက ရောက်လာတာနဲ့ ထန်းရည်ပုံးကိုအရင်ကြည့်တယ်။ ကျူရှင်ဆရာ ကတော့ စားစရာ အရင်ရှာတယ်။ သူက အစားသမား။
ထန်းရည်က မကျန်တော့သလောက်ပဲ။ တရုတ်ကြီးက သိပ်စိတ်ညစ်ခံတဲ့သူမှမဟုတ်တာ။ ရွာဝကို စက်ဘီးလေးနဲ့ ပြန်ထွက်ပြီး အဖြူ တလုံးသွားဆွဲလိုက်တာပဲ။ တလုံးနဲ့ မလောက်တော့ လည်း နောက်တလုံးပေါ့။ အချိန်က တော်တော်လေး နှောင်းလာပြီ။ မနက် ၁၀ နာရီလောက် က စလိုက်တဲ့ဇာတ်လမ်းက ညနေ ၄ နာရီဆိုတော့ အရှိန်ကဘယ်သေးတော့မလဲ။ တရုတ်ကြီး က အားလုံးကို အမီလိုက်ဖို့ အသည်း အသန်ကြိုးစားနေတယ်။ သူ့ဖာသာကြိုးစားရုံတင် မကဘူး သူ့မိန်းမကိုပါ တိုက်လိုက်သေးတယ်။ သူ့မိန်းမက တခွက်ဝင်တာနဲ့ စရစ်ပြီ။ အဲဒါကို အားလုံး သဘောတွေကျပြီး ဝိုင်းရီနေကြတာ။
အားလုံး အေးအေးဆေးဆေးပါပဲ။ ပြီးတော့ ပျော်ပျော်ပါးပါးပဲ။ ဖဲဝိုင်းကလည်း တော်တော်လေး အရှိန်ရနေပြီ။ နောက်တော့ ရခိုင်ကြီးက တီးပြီးဆို ... ဝဏ္ဏရယ် နှဲကြီးမိန်းမ နပ်စ်မရယ်က မြနန္ဒာနဲ့ ကလို့ အဆင်ပြေနေတာ။ အားလုံးမူးနေကြတော့ ဘာက ဘယ်လိုဘယ်လို စဖြစ်တယ်ဆိုတာ မသိဘူးလေ။ တကယ်ကို မသိလိုက်တာပါ။
သိတဲ့အချိန်မှာတော့ ဝုန်းဆိုတဲ့အသံကြီးပဲကြားလိုက်ရတယ်။ အားလုံး မင်တက်မိနေတဲ့အချိန် ရုတ်တရက် တလောကလုံးရှုပ်ထွေးသွားတော့တယ်။
ခုနကပြောတယ်နော်။ ဘာကဘယ်လိုစဖြစ်တယ် မသိဘူးလို့။ ထပ်ပြောဦးမယ် တကယ်ကို ဘာက ဘယ်လိုစဖြစ်လိုက်မှန်း ဘယ်သူမှ မသိလိုက်ကြဘူး။
သိတဲ့အချိန်မှာ ... ဝဏ္ဏက အိမ်ပေါ်ထပ်မှာ သူ့အမေနဲ့ အဘွားကိုကောင်းကောင်း ပြဿနာ ရှာနေပြီ။ မျိုးစုံ တွေအော်ဟစ်သောင်းကျန်းနေပြီ။ အဲဒီမှာ အောက်ကကောင်တွေ အေးအေး ဆေးဆေး ဒီတိုင်းပဲနေလိုက်ရင် ပြီးပြီပေါ့။ မပြီးဘူး ... ဒါမျိုးဆိုရင် တရုတ်ကြီးတို့ကလုံးဝ မရဘူး။ လူကြီးတွေကို စော်ကားတဲ့ကောင်ကို ဆုံးမ ရမယ် ... ဒီလိုမျိုး။
ဘယ်သူမှ ဆွဲချိန်မရလိုက်ဘူး ပေါင် ၂၀၀ လောက်လေးတဲ့ ခန္တာကိုယ် ထွားထွားကြိုင်းကြိုင်း ကြီးက အိမ်ပေါ်ထပ်ကို စွေ့ကနဲ ရောက်သွားပြီး ဝဏ္ဏကို တရစပ် ဆွဲထိုးတော့တာပဲ။ အဲဒီ အချိန်မှာ တရုတ်ကြီးနဲ့ ဝိတ်တူ၊ ဂိုက်တူ ဆိုက်တူ ကျူရှင်ဆရာက နောက်က ပြေးလိုက်သွား ပြီး တရုတ်ကြီးကိုဆွဲပေမယ့် ပိန်ညောင်ရိုးဝဏ္ဏက မရှုမလှ ခံနေရပြီ။
အဲဒီမှာပဲ မထင်မှတ်တာတွေ ဆက်တိုက်ဖြစ်သွားလိုက်တာဆိုတာ။
ဝဏ္ဏမရှုမလှခံနေရတော့ ဝဏ္ဏရဲ့ ချစ်မေမေနဲ့ အဘွားက အလန့်တကြားတွေအော်၊ အဲဒါကို တရုတ်ကြီးကမသိဘဲ ဝဏ္ဏလုပ်လို့အော်တယ်မှတ်ပြီး ဝဏ္ဏကို ပိုနှိပ်စက်၊ တရုတ်ကြီးမိန်းမက အဲဒါကိုနားလည်တော့ သူ့ယောက်ျားကို အတင်းသွားဆွဲ ...။
တရုတ်ကြီးမိန်းမ အေးခိုင်ဆိုတာလည်း ကြည့်ဦး ပေါင် ၉၀ လောက်ပဲရှိတာ။ ဖြူဖြူသေးသေး လေး။ တရုတ်ကြီးကို ဘယ်လိုလုပ်ဆွဲလို့ရမှာလဲ။
အဲဒီအချိန်မှာ ဘုမသိဘမသိ အပြင်ကမူးပြီးပြန်လာတဲ့ ဝဏ္ဏအစ်ကို သူရက ဘာဖြစ်မှန်း သေချာမသိဘဲ ဝဏ္ဏကို ဝင်ဆူသေးတယ်။ သူ့ညီက ပြန်အော်တော့ ဝမ်းတွေနည်းပြီး ငိုရင်း အိမ်နံရံမှာ မြေဖြူတခဲနဲ့ ဘာတွေမှန်းမသိဘူး ထိုင်ရေးနေတော့တယ်။
အောက်ထပ်က ကွပ်ပျစ်မှာ မဗိုက်က ပက်လက်လန်နေပြီ (ဗိုက်နဲ့ဆိုတော့ မှောက်လို့မရဘဲ ပက်လက်ပဲလန်တာ)။ ဝဏ္ဏက တရုတ်ကြီးလက်ထဲက လွတ်တာနဲ့ အောက်ထပ်ကို အမော တကောပြေးဆင်းလာတဲ့အချိန် တရုတ်ကြီးက အောက်ကို လိုက်လာပြန်ရော။ မဗိုက်လည်း ရှောင်နိုင်မှ လွတ်မဟဲ့ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ဝေးရာထပြေးရတာပါပဲ။
အောက်ထပ်က ကွပ်ပျစ်မှာ တခါ ထပ်ပြီး ဝရုန်းသုန်းကားဖြစ်ကြပြန်ရောလေ။ ကွပ်ပျစ်ပေါ်မှာ ပက်လက်လန်သွားတဲ့ဝဏ္ဏကို တရုတ်ကြီးကဝင်လုံးတာ။ အဲဒီအချိန်မှာ ဖိုးသိုက်လည်း ဝဏ္ဏပေါ်က တက်ဖိပြီး ပေါင်ခြံကို ဝင်ထိုး၊ တရုတ်ကြီးကိုလည်း အတင်းဝင်ထိုး လုပ်ပါလေ ရော။ တကယ်က ပုံမှန်ဆိုရင် ဖိုးသိုက်က ပေါင် ၁၁၀ တောင်ရှိတာမဟုတ်ဘူး တရုတ်ကြီးကို ဘယ်နိုင်လိမ့်မလဲ။ သူလည်း အခြေအနေရှုပ်ထွေးနေတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဝင်ကြိတ်ရ တာ။
ရခိုင်ကြီး ကိုအောင်ကျော်ဇံက ငိုနေပြီ။ ဝမ်းနည်းလွန်းလို့တဲ့။ အဲဒီအချိန်မှာ ဧည့်သည် တယောက် ရောက်လာတယ်။ ပဲခူးက ... ဝဏ္ဏနဲ့စင်ကာပူမှာခင်ခဲ့တဲ့ သူငယ်ချင်း။ သူက ဝဏ္ဏဆီ ဘာလာလုပ်တယ် မသိဘူး။ ဧည့်သည်လည်း ဝရုန်းသုန်းကား ဇာတ်လမ်းတွေကြား ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဖြစ်ပြီး ကျောပိုးအိတ်ကလေး ဘေးချ ငူငူလေးရပ်နေရှာတယ်။
အဖြစ်အပျက်က မြန်ဆန်လွန်းပါ့။ ဝဏ္ဏပေါ် တက်ဖိလုံးနေတဲ့ တရုတ်ကြီးရဲ့ ခြေထောက်ကို အေးခိုင်က အတင်းဝင်ဆွဲတဲ့အချိန်မှာ တရုတ်ကြီးက ရုန်းလိုက်တော့ အေးခိုင်ရဲ့ရင်ဗတ်ကို ဆောင့်ကန်လိုက်သလို ဖြစ်သွားပြီး အေးခိုင် ကြမ်းပေါ်ကို ခွေခွေလေး ပြုတ်ကျ သတိလစ် သွားပါတော့တယ်။
အဲဒီမှာ အားလုံး မီးကိုရေနဲ့ငြိမ်းလိုက်သလို ခဏငြိမ်သွားတယ်။ တရုတ်ကြီးကို ကျူရှင်ဆရာက ခြံပြင်ဆွဲခေါ်ထုတ်သွားတယ်။ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ နပ်စ်မက အဲဒီအချိန်မှာ ရုတ်တ ရက် သူ့ရဲ့ ကဏ္ဍရောက်လာပြီဆိုတာ သိပြီး အလုပ်စတယ်။ သူ့ယောက်ျားနဲ့ ဖိုးသိုက်ကို အေးခိုင်ကို အိမ်ပေါ်မတင်ဖို့ ညွှန်ကြားချက်ပေးတယ်။
အိမ်ပေါ်ရောက်တော့ ဘယ်သူ့ကိုခိုင်းရမလဲ ကြည့်တဲ့အချိန်မှာ အားလုံးထဲမှာ လုံးဝမမူးတာ ဆိုလို့ ဝဏ္ဏရဲ့ ညီအငယ်နန္ဒပဲရှိတာတွေ့ရတော့ စာရွက်နဲ့ဘောပင်တောင်းပြီး ခပ်သွက်သွက် ဘာတွေမှန်းမသိ ချရေးတယ်။ ပြီးတာနဲ့ နန္ဒကို “သွား ဆေးဆိုင်မှာ အဲဒါသွားဝယ်ချေ” လို့ ခိုင်းလိုက်တယ်။
စက်ဘီးနဲ့ အပြင်က ကမန်းကတန်းပြန်ရောက်လာတဲ့ နန္ဒဆီက အထုပ်ကို ဖြေပြီး နပ်စ်မက နပ်စ်မ အလုပ်စတင်ပါတော့တယ်။ သွက်လိုက်မြန်လိုက်တာမှ ... မူးနေတယ်လို့ကို မထင်ရ တာ။ ဆေးထိုးအပ် ပြင်ဆင်တာက အစ ဆေးစုပ်ယူတာအဆုံးပေါ့။ အေးခိုင်တင်ပါးထဲ ဆေးကို ထိုးထည့်ပေးလိုက်တာနဲ့ ကောင်မလေး သတိပြန်လည်လာတာပါပဲ။
အေးခိုင် သတိပြန်လည်လာတော့ တရုတ်ကြီးက ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ စန့်စန့်ကြီး အိပ်ပျော်နေပြန် ကော။ ဟောက်များတောင် ဟောက်လို့။ ဝဏ္ဏကလည်း ခုတော့ သူမဟုတ်သလို ဝါတော် ရှစ်ဆယ်ရ ဆရာတော်ကြီးစတိုင်နဲ့ သူ့အမေခူးခပ်ကျွေးတဲ့ ထမင်းကို အေးရာအေးကြောင်း စားနေပြီ။
သူ့ဧည့်သည်ကို ကိုအောင်ကျော်ဇံကဧည့်ထောက်ခံ စကားပြောထားရတယ်။ အဲဒီဧည့်သည်က ညအိပ်မှာလေ။
အိပ်ပျော်နေတဲ့ တရုတ်ကြီးကို ဖိုးသိုက်က ကန်နှိုးတာတောင် မနိုးဘူး။ နှဲကြီးပါဝိုင်းကန်မှ နိုးတာ။ အားလုံးငြိမ်သွားမှ သူတို့ တိုးကြီးကို သတိရတော့တယ်။ ဖဲသမားလေ ... ဝရုန်း သုန်းကား စဖြစ်ကတည်းက ဝိုင်းက ပိုက်ဆံတွေယူပြီး ထပြေးပြီ။ နောက်မှပြောတယ်။ အကျင့်ပါနေလို့တဲ့။ ပြီးတော့ စိတ်မချလို့တဲ့ ပုဆိုးကွင်းသိုင်းပြီး ပြန်ရောက်လာတယ်။
ဖဲဝိုင်းက ဘယ်သူနိုင်လို့ ဘယ်သူရှုံးမှန်းမသိတဲ့ ပိုက်ဆံတွေနဲ့ သူတို့တသိုက် ညလုံးပေါက် ဖွင့်တဲ့ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ထမင်းကြော်သွားစားတော့ ည ၁၀ နာရီတောင် ထိုးလုပြီ။
ဝဏ္ဏကိုတော့ ဧည့်သည်ရှိလို့ပါဆိုပြီး အတင်းဖျောင်းဖျ ထားခဲ့ရတယ်။ လမ်းမှာ တရုတ်ကြီးနဲ့ အေးခိုင်တို့ ရန်သတ်ကြသေးတာပေါ့။ ကွဲမယ်ကွာမယ် ဘာညာတောင် ဖြစ်သေးရဲ့။ ဟုတ်တာ လည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုပါပဲ။
မဗိုက်ကတော့ ဒီလူတွေကြား ကန့်လန့်ကန့်လန့်ပေါ့။
အဲဒီနေ့က ဝရုန်းသုန်းကားဖြစ်နေတဲ့ ဝဏ္ဏတို့အိမ်ရှေ့ကနေ နှဲကြီးအဖေ ဦးမြဟန် ဖြတ်သွား သေးတယ်တဲ့။ သူလည်း ထွေနေတာ။ အဲဒီအိမ်ထဲ သူ့သားနဲ့ချွေးမ သောင်းကျန်းနေတာ မသိရှာဘူး။ အိမ်ရောက်တော့ သူ့သားကိုမေးသတဲ့ ...
“ဟေ့ကောင်သားကြီး ဝဏ္ဏတို့အိမ်မှာ ဘာပွဲလည်းမသိဘူးလုပ်နေတယ်ကွ။ မင်းတို့ မသွားဘူးလား” တဲ့။ နှဲကတော့ ခပ်တည်တည်ပဲ “ဟုတ်လား မသိဘူးအဖေ” လို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
နောက်တနေ့မနက် လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ ဆုံကြတော့ ထုံးစံအတိုင်း ညကအကြောင်း စမြုံ့ပြန်ကြတာပေါ့။ ကျူရှင်ဆရာက တရုတ်ကြီးကို ဆုံးမတော့ တရုတ်ကြီးက “ငါ ဘာလုပ်လို့လဲ ကွ” တဲ့။
ခဏနေတော့ ဝဏ္ဏရောက်လာတယ်။ လမ်းလျှောက်မလာဘူး။ ဆိုက်ကားနဲ့။ ဆိုက်ကား ပေါ်က ဆင်းတော့ ထော့နင်းထော့နင်းဖြစ်နေတယ်။
“ညတုန်းက ဘာတွေဖြစ်လဲ မသိပါဘူးကွာ။ ငါ့ပေါင်ခြံက တော်တော်အောင့်နေတာ” တဲ့။
အကွက်ပဲဆိုပြီး တွယ်ခဲ့တဲ့ ဖိုးသိုက်က မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်။ ကျူရှင်ဆရာက ထပ် ဆုံးမရပြန်တယ်။ ဝဏ္ဏရာ မင်းလည်း ငယ်တော့တာမဟုတ်ဘူး။ အမေနဲ့အဘွားကို သနား သင့်ပြီ ... ဘာညာ ပေါ့လေ။ ဝဏ္ဏက ဘလက်ကော်ဖီတခွက် လို့လှမ်းမှာပြီး ကျူရှင်ဆရာကို အူကြောင်ကြောင် ကြည့်တယ်။ အရမ်းကို ဖြူစင်ရှင်းသန့်တဲ့ သူတော်စင် အကြည့်လေးနဲ့ပေါ့ ပြီးတော့ မေးလိုက်တယ် “ငါဘာလုပ်မိလို့လဲကွ” တဲ့။
တရုတ်ကြီးကော ဝဏ္ဏကော မေးတဲ့ပုံစံက တပုံစံထဲ။ သူတို့တကယ်ကို ဘာမှမသိလို့ မေးတဲ့ပုံ။ ဆုံးမမိတဲ့သူကပဲ ပြန်တောင်းပန်ရမလို .... ။ ပြောသားပဲ အစကတည်းက။ ဒါမျိုးလုပ်ရင် ဒါမျိုး ဖြစ်မှာပဲ လို့ ... ။
Thursday, November 27, 2008 | Labels: ဝတ္ထုတို |
This entry was posted on Thursday, November 27, 2008 and is filed under ဝတ္ထုတို . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
အော်. . သံဝေဂ ရစရာပါလားနော်..... ဟီဟိ .. နာ့လိုကောင်တွေ ရှေးတုန်းကတည်းကရှိခဲ့ သကိုး ...
သွေးဆိုးလိုက်ကြတာ။ ကြားထဲက ထန်းရည်တွေ အရက်တွေ နာမည်ပျက်တယ်။ :P
နောက်ဆုံး ဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲလို့ မြန်မြန်ဖတ်သွားတာ...
တားက မူးရင် ပိုငြိမ်သွားတယ်။
ကောင်းကင်ကို ပြောသလို အရက်နာမည်ပျက်မှာဆိုးလို့
မတူးတူး သူငယ်ချင်းတွေ အကြောင်းရေးထားတာ
ဟိ ..ဖိုးသိုက်မိန်းမ ဒေါ်ဗိုက်ရေ..
၀ါသနာပါရင် အိမ်မှာ တ၀ိုင်းလောက် ဆုံမယ်လေ ..ဟားဟား
မတူးတူးကရော မဗိုက်လား မနာ့စ်လား မအိခိုင်လား ဘူလဲ ဘူလဲ
သွက်ပြီး အရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတာပဲ ဆရာမခင်ခင်ထူးတို့ ရေးပုံမျိုးနော် ဒေါ်သန်းမြင့်အောင်ရေးတာလဲ ဒီလိုမျိုးပဲ
တကယ်ကို တမေ့တမေနဲ့ အသက်မရှုပဲဖတ်သွားတယ်မမရေ ရေးပါဦးနော်
ဟီးဟီး ရီရတယ်ဗျို့ ဗျဲ....